"Iziva ngathi likhaya" Igumbi lokulala elikhulu, Indawo entle kakhulu
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguMoh'D
Igumbi lokulala elikhulu kwi-villa ebekwe kwindawo epholileyo kunye nekhaya eWest Bay Area ene-7min kude nePearl Qatar, i-15min kude ukuya eHIA (kwisikhululo seenqwelomoya) kunye ne-10min ukuya eDoha Downtown / Souq Waqif.
Ifakwe ngokupheleleyo, enegumbi lokuhlambela eline-ensuite, i-AC, igumbi elikhulu elakhelwe ngaphakathi elinesipili kunye nefestile ejonge kwikhompawundi.
Igumbi lokuhlala, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, iGadi/Iyadi yangasemva, indawo yoMzimba kunye nePool yokuQubha (ngaphakathi kwekhomponi), 24/7 Ivenkile enkulu ene-2min yokuhamba umgama wokuhamba. Ukugubungela i-Wi-Fi kuzo zonke iindawo, Isilwanyana esinobubele, ipaki yemoto yesitrato.
Wamkelekile kuqala eQatar nakwindlu , ivilla inamagumbi amane okulala , igumbi lam , igumbi leofisi ( ndilenze njengeofisi yomsebenzi wam ) kunye namagumbi amabini okulala e-Airbnb enye yawo ( le uyijongileyo ) , inkosi igumbi lokulala elinegumbi lokuhlambela ngaphakathi kwigumbi , kunye nelinye igumbi , linegumbi lokuhlambela labucala ( alabelwe nabani na kodwa kungekho ngaphakathi kwigumbi kodwa kude nomnyango wegumbi 2 yeemitha kuphela ) .
ikhitshi , igumbi lokuhlala , igumbi lokuvasa ...njl zonke kwabelwana ngazo kwaye kumgangatho ophantsi .
indawo yendlu kumbindi we-doha ngandlela thile (iDoha incinci ngenene xa kuthelekiswa nezinye izixeko) kwaye ungafikelela kwiindawo ezininzi usebenzisa i-uber okanye iteksi ngaphakathi kwe-10-15 min kunye nexabiso le-9USD.
Ndiyathemba ukuba oku kuya kuyiphendula imibuzo yakho, ukuba kukho enye into oyifunayo, ndicela undazise.
Nceda uqiniseke ukuba ufunda imithetho yendlu kwakhona ukuze uqinisekise ukuhlala okumnandi kwakho kunye nabanye
Iindwendwe ezi-1 zeendwendwe azivumelekanga kumagumbi / kwigumbi lokuhlala kuphela ( Umgangatho ophantsi ) kwaye ukuya kuthi ga ngo-10 ebusuku.
I-2-Indwendwe kufuneka icoce indawo ekwabelwana ngayo emva kokusetyenziswa ngokuthe ngqo kwaye ingashiyi nayiphi na inkunkuma okanye izinto ezingcolileyo ukuba zicocwe kamva.
3- Undwendwe akufuneki lushiye iingcango okanye iifestile zivuliwe (ukuthintela izinambuzane kunye neekati ezilahlekileyo ukuba zingene kwipropati)
Umbuki zindwendwe ngu- Moh'D
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Doha